'विदेशबाट घर आउँदा सुन तस्करीमा फस्नुहाेला नि !' | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
असोज २४, २०७८ आइतबार १३:१४:१५ | नारायण कोइराला
घर जानको लागि विमानस्थल पुग्ने तयारी गर्दासम्म मनमा अनेक प्रकारका विचार आएका थिए । अहिलेको अवस्थामा सजिलै विमानस्थल गएर घर जान सम्भव थिएन । पहिला जस्तो सजिलै टिकट लिएपछि ढुक्क भएर घर पुगिन्छ भन्ने अवस्था त झनै छैन ।
सबै तयारीपछि विमानस्थल पुग्दासम्म मनमा अनेक डर भए पनि आफूसँग आवस्यक सबै कागजपत्र भएकोले मनमा धैर्यता भने थियो नै । विमानस्थलको गेट बाहिर कसैले बोलेको एउटा वाक्यले मलाई तर्सायो ।
‘भाइ सामान लानु हुन्छ कि ?’
मैले सोधेँ, ‘कस्तो सामान दाजु ?’
‘हातमा लगाउने क्या ।’
उनले यति भन्ने बित्तिकै मैले कुरोको चुरो बुझिहालेँ । आजभोलि सुन तस्करको बिगबिगी छ नै । उनले बोलेको वाक्यको अर्थ यही थियो । सुनको बाला बनाएर भरिया बनाई नेपालमा सुन तस्कर गर्ने । मैले उनको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेँ ।
यस्तो गैरकानुनी धन्दामा मलाई फस्नु थिएन । म सरासर विमानस्थलभित्र प्रवेश गरेँ । विमानस्थलमा देखिने ठगीका अनेक रङ्गहरुसँग जोगिन म सबैलाई आग्रह गर्दछु । कसैलाई सहयोग गरेँ सोचिरहँदा कारागार पुगिएला, सचेत रहौँ ।
विमानस्थलको गेटमा खिन्न भएको मन विमानस्थलभित्र पुगेपछि प्रसन्न भयो । त्यहाँ घर जानको लागि विमानस्थलभित्र पुग्नुभएका नेपालीहरु देख्दा आफ्नोपनको महसुस बढ्यो । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हुँदा यसपाली लाइन लामो नै थियो । कोही साथीभाइहरु आफूसँग बढी समान भएकोले चिन्तित पनि देखिनुभएको थियो । यहाँ निर एउटा कुरो सधै मलाई अचम्म लाग्छ भनाैँ या जानीजानी पछुताउने बानी भनौं, टिकटमा जहाजले लिन दिने लगेज स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरे पनि बढी सामान ल्याएर विमानस्थलमा अनावस्यक बहस गर्नैपर्ने । यो देखेर मलाई अचम्म लाग्छ । यसपाली पनि विमानस्थलमा यही अवस्था देखियो ।
मानिसहरू लाइनमा उभिएर आफ्नो पालोको पर्खाइमा थिए भने काउन्टरमा अनावस्यक बहस गरी समय बर्बाद गरिरहेका थिए । जति बहस गरे पनि आफ्नो लगेज त्यहाँ तोके भन्दा बढी लिन बिल काट्नु नै पर्ने हुन्छ । त्यो भन्दा अर्को विकल्प छैन नै । यो त लगेज काउण्टरको कुरो थियो । हाते ब्याग चेक गर्ने ठाउँमा त झन ठूलो अन्तर देख्न पाइन्थ्यो । स्पष्ट रूपमा सात किलो लेखिएको थियो र पनि दश किलोसम्म छुट दिएको देखियो । अब त्योभन्दा पनि बढी समान जबर्जस्ती ल्याउँदा दोष कसको ? सामान ल्याउनेको की ? जाँच गर्न बस्नेको ? त्यसैले नियमलाई पालना गरौं ताकि पछुताउनु नपरोस् । हुन त चाडपर्वको बेला हो । घरपरिवार इष्टमित्र सबैलाई सम्झदा सम्झदै सामानको भारी ठूलो भएको पत्तै हुँदैन । तर पनि हामीले यी सबै कुरालाई मिलाएर व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सबै जाँच सकेपछि मलगायत अरु यात्रुहरु जहाज भएतर्फ लाग्यौँ । जहाजमा चढ्यौँ । यो समयमा घर जान कठिन छ भन्ने बाहिर जस्तो हल्ला थियो, त्यहाँ पुगेपछि मलाई त्यस्तो लागेन । केही बेरमै जहाजले भुइँ छोड्यो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ११ हजार तीन सय ५२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
प्रजिअसहित कर्मचारीमा काेराना देखिएपछि १ हप्ताका लागि जिल्ला ...
शेयरबजार ३८ अंकले घट्यो, कारोबार रकम पनि ओरालो
मास्कमा कालोबजारी गरेको आरोपमा हेटौँडामा तीन जना पक्राउ
टन्सिल भयाे भनेर आउनुहुन्छ, तर पीसीआर परीक्षण गर्दा काेराेना ...
हँसिया र ढुङ्गा प्रहार गरी पतिको हत्या
आज ९९ जना नेपाली कामदार इजरायलका लागि उड्दै, दोस्रो चरणमा ए...
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि एपीएफले जित्यो
कांग्रेस महामन्त्री शर्माको सपरिवार कोरोना संक्रमित, सभामा सतर्...
सडक विस्तार भएसँगै संखुवासभाको रसिलाे सुन्तला धरान र बिराटन...
विश्वमा भइरहेको टकरावकाे नतिजा खतरनाक निस्कन सक्छ : सी जिनपिङ